Забур 72 CARS - Nnwom 72 ASCB
1Ao Onyankopɔn, fa wʼatɛntenenee ma ɔhene no,
na fa wo tenenee ma ɔhene babarima.
2Ɔde tenenee bɛbu wo nkurɔfoɔ atɛn,
ɔbɛbu wo nkurɔfoɔ a wɔrehunu amane no atɛntenenee.
3Mmepɔ no de yiedie bɛbrɛ nnipa no,
nkokoɔ no de tenenee bɛba.
4Ɔbɛko ama nnipa no mu amanehunufoɔ
na woagye wɔn a wɔnni bie mma nkwa;
5Owia ne ɔsrane da so wɔ hɔ yi
wɔbɛsuro wo awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
6Ɔbɛyɛ sɛ osuo a ɛtɔ gu asase a wɔadɔ soɔ so,
te sɛ obosuo a ɛgugu asase so.
7Teneneefoɔ bɛnyini frɔmfrɔm wɔ ne berɛ so;
yiedie bɛbu so kɔsi da a ɔsrane nni hɔ bio.
8Ɔbɛdi ɔhene afiri ɛpo akɔsi ɛpo
afiri Asubɔnten Efrata akɔsi asase ano.
9Ɛserɛ so mmusua bɛkoto nʼanim
na nʼatamfoɔ adi mfuturo.
de apeatoɔ bɛbrɛ no;
de ayɛyɛdeɛ bɛbrɛ no.
11Ahemfo nyinaa bɛkoto no
12Na ɔbɛgye mmɔborɔfoɔ a wɔsu frɛ no,
ne amanehunufoɔ a wɔnni ɔboafoɔ.
13Ɔbɛhunu wɔn a wɔayɛ mmrɛ ne ahiafoɔ mmɔbɔ
na wagye ahiafoɔ nkwa.
14Ɔbɛgye wɔn afiri nhyɛsoɔ ne akakabensɛm mu,
ɛfiri sɛ wɔn mogya som bo wɔ nʼanim.
Ma wɔmfa sikakɔkɔɔ mfiri Seba mmrɛ no.
Ma nnipa mmɔ mpaeɛ mma no
na wɔnhyira no da mu nyinaa.
16Aburoo mmu so wɔ asase no so nyinaa;
nnuane mmu so wɔ nkokoɔ so,
na ɛnyini sɛ mfuo so serɛ.
ɛntena hɔ nkyɛre sɛ owia.
Wɔbɛfa ne so ahyira amanaman no,
18Nhyira nka Awurade Onyankopɔn, Israel Onyankopɔn!
Ɔno nko ara na ɔyɛ anwanwadeɛ.
19Nhyira nka ne din a animuonyam ahyɛ no ma no daa daa.
Ma nʼanimuonyam nhyɛ ewiase nyinaa ma.
20Yisai ba Dawid mpaeɛbɔ no awieeɛ nie.
ASCB : Nnwom 72